Knowledge Archives - JOY Mobile
iPhone 11 ကိုအားအမြန်သွင်းမယ်
/Under	Advertise, Knowledge
/With	19,902 Comments
မင်္ဂလာပါ။ iPhone 11 ကိုင်ထားပြီး အားသွင်းရတာအရမ်းကြာတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် အားသွင်းကြိုးကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ iPhone 8 နှင့်အထက် iPhone 11 အထိ အားသွင်းမြန်ချင်ရင်တော့ PD Power Adapter တစ်ခုနဲ့ USB-C to Lightning Cable တစ်ခုလိုပါတယ်။ အောက်မှာတော့ ၎င်းပစ္စည်းနှစ်ခုကို ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ AUKEY PA-Y18 (PD Power Adapter) AUKEY PA-Y18 PD စနစ်ပါအားသွင်းခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 8 နှင့်အထက်ဖုန်းများအားလုံး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ AUKEY PA-Y18 စျေးနှုန်းကတော့ မြန်မာငွေ ၃၆,၀၀၀ ကျပ်ပါ။ AUKEY CB-CL1 (USB-C to Lightning Cable) AUKEY CB-CL1 iphone တွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားပေးတဲ့ USB-C to Lightning Cable ဖြစ်ပါတယ်။ MFi Certified ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ iPhone ရဲ့ Battery ကိုထိခိုက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ AUKEY CB-CL1 စျေးနှုန်းကတော့ မြန်မာငွေ ၂၉,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ AUKEY PA-Y18 + CB-CL1 AUKEY PA-Y18 နဲ့ CB-CL1 ရဲ့ တန်ဖိုးစုစုပေါင်းက မြန်မာငွေ ၆၅,၀၀၀ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AUKEY ကနေပြီး…continue reading →
မှန်ကပ်အထူကပ်ထားရင် အောက်မှန်မကွဲဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကြီးက အမှားကြီးပါဗျာ… ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ မှန်ကပ်အထူပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုတ်ကျတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အောက်မှန်ကွဲတတ်ပါတယ် ယခုလို မှန်ကပ်အထူကပ်ထားပေမယ့် အောက်မှန်ကွဲသွားတဲ့ဖုန်းမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ ၃ ၄ရက်လျှင်တစ်လုံးလောက် တွေ့နေရပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုင်ဖူးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလဲ မှန်ကပ်ကပ်ထားပါရက်နဲ့ အောက်မှန်ကွဲဖူးပါတယ် ဒါကြောင့် မှန်ကပ်အထူကပ်ထားလို့ အောက်မှန်မကွဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကိုပြောင်းလဲပြီး မိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးဖုန်းများကို ရိုရိုသေသေကိုင်ကြပါလို့ပြောကြားရင်း… 🏛️ JOY - Mobile Phone Accessories & Gadget Store 🏛️--- ဖုန်းအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေး--- မြတ်စေတနာ လူမှုကူညီရေးရုံး မျက်စောင်းထိုး၊ မြနဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေး ရွှေဖြူခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှေ့ မိုးကုတ်မြို့ (အရှေ့ပိုင်း)📞📞 09256015535 🏛️ JOY Mobile Phone Service (ဖုန်းပြုပြင်ရေး) 🏛️--- ဖုန်းအမျိုးမျိုးပြုပြင်ရေးနှင့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်း--- ရှမ်းတောကျောက်တိုင်ကွင်း နွေစံအိမ်ကဖေးလမ်းချိုး အောင်ချမ်းသာရပ် မိုးကုတ်မြို့ (အရှေ့ပိုင်း)📞📞 09402514250continue reading →
မှန်မကွဲတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု စျေးဘာလို့ကွာတာလဲ?
🤔 မှန်မကွဲတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု စျေးမတူတာဘာကြောင့်လဲ? 💡 ကျွန်တော်သိရသလောက် ပြောပြရရင်တော့ မှန်သားအမျိုးအစားတွေကွာပါတယ်မှန်မကွဲမှာသုံးထားတဲ့ ကော်အမျိုးအစားကွာပါတယ်မှန်သားချော့မွတ်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့နည်းပညာကွာပါတယ်ဘေးအနားတွေက Curved ဖြစ်မဖြစ်ကွာပါတယ် 💵 စျေးသက်သာရင် သက်သာသလို အရည်အသွေးညံ့တတ်တာ သဘာဝပါ 💵 ဒါပေမယ့် တစ်သောင်းကျော်တန်မှန်မကွဲဖြစ်လို့ အောက်မှန်မကွဲဘူး ပိုခိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောစကားတွေကို လုံးဝမယုံပါနဲ့ ⚠️ ဘယ်လောက်စျေးကြီးတဲ့မှန်မကွဲပဲဖြစ်ဖြစ် အခန့်မသင့်ရင် အောက်မှန်ကော မှန်မကွဲကော ကွဲတတ်ပါတယ် ✔️ ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့မှန်မကွဲကိုပဲကပ်ထား ကပ်ထား မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းကို သတိထားပြီးသုံးတာကအကောင်းဆုံးပါ 💡 ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ အချိန်ရတဲ့အခါ စျေးအပေါဆုံး ၁ထောင်တန်မှန်မကွဲကို တူနဲ့ထုပြတဲ့ Video တင်ပေးပါဦးမယ် 🤪 ✅ တကယ်လို့ ဖုန်းမှန်မကွဲကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိုးကုတ်တစ်မြို့လုံးမှာ မှန်မကွဲကို အသပ်ရပ်ဆုံးကပ်ပေးနေတဲ့ JOY Mobile ကို သတိရပေးပါဗျာ… •———————————————• 🏛️ JOY - Mobile Phone Accessories & Gadget Store 🏛️--- ဖုန်းအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေး--- မြတ်စေတနာ လူမှုကူညီရေးရုံး မျက်စောင်းထိုး၊ မြနဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေး ရွှေဖြူခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှေ့ မိုးကုတ်မြို့ (အရှေ့ပိုင်း)📞📞 09256015535 ❗ ဖုန်းအပိုပစ္စည်းများကို JOY Mobile ရဲ့ ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့ JOY - Mobile Phone Accessories & Gadget Store တွင်သာ အဓိကရောင်းချပေးနေပါပြီ ❗ 🏛️…continue reading →
Remax Bodi 30,000mAh Power Bank Ks30,000